MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA ADHIJISTAHA CADDAANKA MAREYKANKA AH - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Adhijistaha Caddaanka Mareykanka ah
Boba Fett oo ah Adhijirka Caddaanka Mareykanka ee jira 1 sano
Adhijir Cadaan Mareykan-Canadian ah
White Swiss Jarmal Shepherd
Adhijirka Cad ee Switzerland
Adhijir Jarmal Cadaan ah
Adhijirro cadaan ah
Eey Shepherd White
uh-mer-i-kuh n wahyt shep-erd
Adhijirka Cadaan ee Mareykanku wuxuu u egyahay sida saxda ah a Adhijirka Jarmalka midab mooyee. Waxay leedahay jaakad adag, dheer, ama dhaadheer. Noocyada timo-dhaadheer ma leh jaakad hoosta ku jirta. Midabku had iyo jeer waa cadaan.
Shepherds White waa geesiyaal, feejignaan, feejignaan iyo cabsi la'aan. Iyagu waa kuwo faraxsan, adeecsan oo u hamuun qaba inay waxbartaan. Deganaan, kalsooni, dhab ah oo xariif ah, Shepherds White waa kuwo aad u daacad ah oo geesi ah. Mar labaad kama fekerayaan inay naftooda u bixiyaan xirmooyinkooda aadanaha. Waxay leeyihiin awood waxbarasho sare. Adhijirrada Cad waxay jecel yihiin inay u dhowaadaan qoysaskooda, laakiin waxay ka digtoonaan karaan shisheeyaha. Noocani wuxuu ubaahanyahay dadkiisa mana aha in lagukala baxo cidlo mudo dheer. Waxay ciyi karaan oo keliya markay dareemaan inay lagama maarmaan tahay. Badanaa waxaa loo isticmaalaa sida eeyaha booliska, White Shepherd-ku wuxuu leeyahay dareen ilaalin aad u xoog badan, wuxuuna aad ugu daacadsan yahay qofka gacanta ku haya. Bulsho noocani wuxuu si fiican uga bilaabanayaa eey. Gardarada iyo weerarada dadka loo geysto waxaa sabab u ah maamul xumo iyo tababar xumo. Dhibaatooyinka ayaa soo ifbaxaya markii milkiilaha uu u oggolaado eeyga inuu aamino inuu yahay hogaamiyaha xirmada ka badan aadanaha iyo / ama uusan siinin eeyga jimicsi maskaxeed iyo jireed maalin kasta waxay u baahan tahay inay ahaato mid deggan. Noocani wuxuu ubaahan yahay milkiileyaasha kuwaas oo ah dabiici ahaan awood leh in ka badan eeyga si deggan, laakiin adag, kalsooni leh oo joogto ah. Eyga xasilloon, hagaagsan oo tababaran ayaa inta badan guud ahaan ku wanaagsan xayawaannada kale oo aad ugu fiican carruurta qoyska. Waa inay si adag ugu tababaranyihiin adeecida laga soo bilaabo da'da hore. Adhijirrada Caddaanka ah ee leh milkiileyaal dadban iyo / ama dareenkooda aan la fulin waxay noqon karaan kuwo xishood badan, xariif ah oo u nugul cabsi qaniinyada oo horumarisa ilaalin arrinta . Waa inay ahaadaan tababaray isla markaana bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo yaraantiisii. Adhijirrada Caddaanka ahi ma dhagaysan doonaan haddii ay dareemaan inay ka maskax adag yihiin milkiilahooda, hase yeeshe sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonaan edbinta adag. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan hawo awood dabiici ah oo ku saabsan dabeecadooda. Ha daaweyn eeygan sidii inuu yahay aadanaha . Baro dareen canine oo eyda ula dhaqmaan si waafaqsan. Shepherds White waa mid ka mid ah noocyada ugu caqliga badan uguna tababaran. Eygan shaqeeya ee xirfadda sare leh ayaa la imanaya wado shaqo iyo hawl nolosha ah iyo hogaamiye xirmo joogto ah si loo tuso hanuun. Waxay u baahan yihiin meel ay ka soo qaadaan tamartooda maskaxeed iyo jidheed. Tani ma aha nooc ka mid ah oo ku farxi doona si fudud u jiifsiga qolkaaga fadhiga ama ku xanniban daaradda. Noocani waa mid caqli badan oo si fudud wax u barta oo loo isticmaalay sida ido, eey waardiye ah, shaqada booliska, hage indhoolayaasha, adeegga goobidda iyo samatabbixinta iyo milatariga. The White Shepherd sidoo kale wuxuu ku fiicanyahay waxqabadyo badan oo kale oo ey ah oo ay ku jiraan schutzhund, raad raaca, adeecid, firfircoonaan, kubbadda duulista iyo isboortiga. Sanka sankiisa ayaa urin kara daroogada iyo kuwa ku soo xadgudbay , oo uga digi karaa kuwa ka shaqeeya meelaha ay joogaan miinooyinka dhulka hoostiisa waqtigooda si looga fogaado qarxinta, ama gaaska ka soo daata dhuumaha lagu aasay 15 fuudh dhulka hoostiisa. The White Shepherd sidoo kale waa riwaayad caan ah iyo wehel qoys.
Dhererka: Ragga 24 - 26 inji (60 - 65 cm) Dumarka 22 - 24 inji (55 - 60 cm)
Miisaanka: 77 - 85 rodol (35 - 40 kg)
Qaar ka mid ah cudurada laga helay tarankaani waa miskaha iyo xusulka dysplasia (hubi in labada waalidba miskaha laga cadeeyay inay yihiin OFA wanaagsan) cudurka wadajirka ah ee malabsorbtion syndrome (oo ay kujiraan osteochondritis) megaesophagus pannus iyo noocyada kale ee cudurka indhaha (badanaa looma arko) ) buunbuunin xasaasiyadda (cuntada, boodada ama hawada) dhibaatooyinka kale ee maqaarka ama jaakadda iyo ilkaha oo maqan. Khadadka qaarkood ee Caddaanku waxay dhibaato ku qabaan cudurro sida Lupus iyo / ama noocyo kale oo cudurrada is-difaaca jirka ah, iyo sidoo kale Cudurka Dhaawaca ee Dhalashada. Waqtigan xaadirka ah, dhibaatooyinka iswada ayaa si dhif ah ugu yar noocyada.
Adhijirrada Caddaanka ah kuma fiicna guriga dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu waxoogaa dhaqdhaqaaq ah kuma jiraan gudaha waxayna ku fiican yihiin ugu yaraan daarad weyn.
Adhijirrada Cad waxay jecel yihiin waxqabad adag, waxaana doorbidayaa inay ku darsamaan tababar nooc ka mid ah, waayo eeyahaani waa kuwo aad u caqli badan oo jecel tartan adag. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Adhijirrada badankood waxay jecel yihiin inay ciyaaraan kubbadda ama Frisbee. Toban ilaa shan iyo toban daqiiqo oo la soo raaco oo ay la socdaan socod maalinle ah ayaa eeygaaga daalin doona si aad u fiican sidoo kale waxay siin doontaa dareen ujeedo. Hadday tahay kubad baacsiga, Frisbee qabashada, tababarka addeecista, kaqeybgalka kooxda ciyaarta canine ama qaadashada socod dheer / jog, waa inaad diyaar u noqotaa inaad bixiso nooc ka mid ah jimicsiga maalinlaha ah. Jimicsiga maalinlaha ah waa inuu had iyo jeer ku jiraa socod / jog maalinle ah si loo qanciyo dareenka hijrada eeyga. Haddii aan jimicsi la samayn iyo / ama aan maskax ahaan caqabad ku ahayn, noocani wuxuu noqon karaa nasasho la'aan iyo burbur . Shaqada ugu fiican ayey ku qabataa.
Qiyaastii 12 sano
Ilaa 8 ilaa 12 eey
Noocani wuxuu si joogto ah u daadiyaa timo yar yar waana xilli culus oo daadiya xilliyada qaarkood. Waa inay cadayaan maalin kasta ama waxaad timo ku yeelan doontaa gurigaaga oo dhan. Maydho oo keliya marka ay lagama maarmaanka u tahay qubayska oo keliya waxay sababi kartaa cuncun maqaarka ah oo saliidda ka dhammaata Hubi dhegaha iyo ciddiyo jarista si joogto ah.
Asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka, Kanada iyo Yurub. Waxay ahayd farac toos ah oo ka mid ah Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka . Adhijirka Caddaanka laguma darin nooc kale oo eey ah tan iyo markii la keenay Waqooyiga Ameerika. Xaqiiqdii, ma jirin nooc kale ama noocyo lagu daray si looga dhigo cadaan. Hidda-wadaha xukuma midabka cad waa qayb dabiici ah oo ka mid ah wadarta guud ee hidde-wadaha hidde-wadaha ee Jarmalka Shepherd Dog. Adhijirka Caddaanka ahi wuxuu si madax bannaan uga diiwaangashan yahay Ururka 'White Shepherd Association' ee Mareykanka Mareykanka.
AWSA = Ururka Caddaaniyiinta Caddaanka Mareykanka
WGSDCV = Naadiga Dog Shepherd Dog Club ee Fiktooriya
WSSDCA = White Swiss Shepherd Dog Club ee Australia
Adhijirka Caddaanka ah waxaa loo diiwaangeliyey inuu yahay Adhijir Caddaan ah oo ka tirsan Ururka 'White Shepherd Association' (AWSA) iyo United Kennel Club (UKC). Fédération Cynologique Internationale (FCI) waxay u aqoonsatay inay tahay a Berger Blanc Switzerland sanadkii 2002, oo ah isla magaca White Swiss Shepherd Dog Club of Australia (WSSDCA) adeegsado (tarjumaad ahaan). Swissku wuxuu u aqoonsaday White GSD inuu yahay nooc gaar ah marka hore, waana sababta Switzerland loogu aqoonsaday inay tahay waddanka asalka iyo magaca caanaha oo loo beddelay inuu tan ka tarjumo.
Naadiyada kale badankood waxay u diiwaangeliyaan sida a Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka (Caddaan) ugu yeeraya midabka cad qalad u qalma.
Runta Adhijirka Cadi ee yar yar ee jira 11 toddobaad
Doc iyo Cindy GSDs cad
Doc, Cindy iyo qoyskooda eey yaryar
Chow waqtiga eeyaha!
Mandy oo ah Adhijirka Caddaanka Mareykanka ee 8 bilood jira
Eeg tusaalooyin badan oo ah Adhijirka Caddaanka Mareykanka
Sawirada Adhijirka Cadaan ee Mareykanka 1
Sawirada Shepherd White American 2
Sawirada Shepherd White American 3
Eyda Shepherd: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
Noocyada Eeyaha Adhijirka ah
White Shepherd Adhi
Adhijir cad oo reer Switzerland ah
timo cas buluug shilinta buluugga ah
yorkshire terrier shih tzu mix
sarkaal dahabka shorthaired Jarmal isku darka pointer
Pyrenees weyn iyo retriever dahabka
silig timaha silig isku darka pug